आज सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार सुनको भाउमा बढोत्तरी आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार सुनको भाउ स्थिर रहेको थियो। यो प्रतितोला फाइन गोल्ड...
चाडपर्वका बेला सुन कारोबार शून्यप्रायः, पसलमात्र रुघ्ने व्यवसायीको काम
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसको प्रभावका कारण नेपालमा चाडपर्वका बेला पनि सुनचाँदीका कारोबार शून्यप्रायः बनेको छ। नेपालमा प्रायः सुनचाँदीको कारोबार महिलाहरुको विशेष पर्व तीजबाट सुरु भएर दसैँ, तिहारहुँदै मंसिर महिनासम्म अत्यधिक हुने गर्छ। यद्यपि यो वर्ष चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भएयता सुनचाँदीको व्यापार माथि उठ्न सकेको...
आज सुनको भाउ तोलामै रु. ९०० ले घट्यो, चाँदीमा पनि गिरावट
काठमाण्डौ । साताको पाँचौँ कारोबार दिन बिहीबार सुनको भाउ घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तालामा ९०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो बुधबार स्थिर रहेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार...
आज सुनको दाम कति ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यसायी महासंघका अनुसार भाउ स्थिर रहँद आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ६०० रुपैयाँ बढेको थियो। योसँगै हिजो प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको थियो। हिजो प्रतितोला फाइन...
सुनको भाउमा ओरालो यात्रा जारी, चाँदीमा पनि उस्तै
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज मंगलबार पनि घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ घटेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार ८०० रुपैयाँ र ९५ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको...
सुनको भाउमा लगातार गिरावट, आज कति घट्यो ?
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा गत सातादेखि आइरहेको गिरावटले यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार १०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार सुनको भाउमा १०० रुपैयाँको...
साताभरि कति बढ्यो/घट्यो सुनको भाउ ? आज कति ?
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि सुनको भाउमा आइरहेको गिरावटले निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले गिरावट आएको छ। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामा...
लगातार घट्दै सुनको भाउ, चाँदीमा पनि गिरावट कायमै
काठमाण्डौ । साताको कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार पनि सुनको भाउमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ७०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार पनि सुनको भाउ तोलामा १ हजार २०० रुपैयाँ गिरावट आएको थियो।...
काठमाण्डौ । यो साता लगातार बढिरहेको सुनको भाउ बुधबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउमा तोलामै १ हजार २०० रुपैयाँको गिरावट आएको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार सुनको भाउ तोलमै ९००...